Ch 15 Matthew – 2kalluunka
Home / Kitaabka Quduuska ah / Injiilka Matthew / Ch 15 Matthew
15:1 Then the scribes and the Pharisees came to him from Jerusalem, oo wuxuu ku yidhi:
15:3 But responding, Wuxuu iyaga ku yidhi: “And why do you transgress the commandment of God for the sake of your tradition? For God said:
15:4 ‘Honor your father and mother,'iyo, ‘Whoever will have cursed father or mother shall die a death.’
15:7 Hypocrites! How well did Isaiah prophesy about you, oo wuxuu ku yidhi:
15:10 And having called the multitudes to him, Wuxuu iyaga ku yidhi: “Listen and understand.
15:15 Iyo wax ka qabashada, Butros ayaa ku yidhi, “Explain this parable to us.”
15:16 Laakiin wuxuu ku yidhi: “Are you, haddeer, without understanding?
15:21 Oo tegey halkaas ka, Ciise ku noqday meelaha Turos iyo Siidoon.
15:22 Oo bal eeg, naag reer Kancaan ah, ka socda qaybo ka mid ah kuwa ka soo baxa, qayliyey, isaga ku leh: "Qaado ii naxariiso, Sayidow,, Wiilka David. Gabadhayda jinni baa si xun u dhibi jiray oo jinniguna ah. "
15:23 Uu eray ku odhan iyada. Markaasaa xertiisii, dhowaanayay, isaga soo cabteen, oo wuxuu ku yidhi: "Eri, waayo, waxay ka soo inaga daba qaylinaysaa. "
15:24 Iyo wax ka qabashada, ayuu yiri, "Ma laygu soo diray marka laga reebo idaha, kuwaas oo ay iska dhacday reer binu Israa'iil."
15:25 Laakiin iyadu way u soo dhawaaday iyo isaga caabuday, oo wuxuu ku yidhi, "Lord, i caawiya."
15:26 Iyo wax ka qabashada, ayuu yiri, "Ma wanaagsana in carruurta kibistooda la qaado oo eeyaha loo tuuro."
15:27 Laakiin waxay tidhi, "Haa, Sayidow,, laakiin eeyaha dhalinyaro ah ayaa sidoo kale wax ka cunin jajabka ka dhaca miiska sayidkooda ka. "
15:28 Markaasaa Ciise, ka jawaabidda, waxay ku tidhi iyadii: "Naag O, rumaysadkaagu waa weyn yahay. Ha loo sameeyo, waayo, waxaad la mid ah sida aad rabto. "Oo gabadheedii ka Saacaddaas qudheeda ayuu bogsiiyey.
15:29 Markaasaa Ciise halkaas ka gudbay, ayuu badda Galili ag yimid. Oo baxaya buur gal, uu halkaas ku fadhiistay.
15:30 Oo dad badan baa u yimid, isagoo iyaga carrab la, indha la ', curyaannada, dadka naafada ah, iyo kuwo kale oo badan. Oo iyana waxay ku wuxuu iyagii ku tuuray ayuu cagihiisa ag dhigay, wuuna bogsiiyey,
15:31 aad u badan si ay dadkii badnaa ka yaabay, maxaa yeelay, carrabka la'aa oo hadlaya, socodka curyaan, la'aa oo wax arkaya. Oo iyana waxay ku weyneeyey Ilaaha reer binu Israa'iil.
15:32 Markaasaa Ciise, isugu yeedhay xertiisii, sheegay: "Waxaan u naxariisanayaa dadkii badnaa, maxaa yeelay, iyagu mar Samirkoodii Dartiis ila hadda muddo saddex maalmood ah, iyo iyaga oo aan haysan wax la cuno. Oo haddana waxaan diyaar u eryo ma ihi, soonka, waaba intaasoo ay jidka ku itaal beelaane. "
15:33 Markaasaa xertii ku yidhi isagii: "Laga soo bilaabo meesha, ka dibna, oo lamadegaanka ku yaal, waxaan ka heli lahaa kibis ku filan dad aad u badan si ay si ka dhergin?"
15:34 Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi iyagii, "Kibsood Sidee badan oo kibis baad?"Laakiin waxay ku yidhaahdeen, "Todobo, iyo in yar oo kalluun yaryar ah. "
15:35 Oo isna wuxuu baray dadkii badnaa ku dangiigsadaan oo dhulka ku.
15:36 Oo qaadashada toddobadii kibsood iyo kalluunkii, iyo mahad, ayuu kala jejebiyey oo xertiisii ​​siiyey inay, iyo xertii siiyey dadkii.
15:37 Dhammaantood way wada cuneen oo dhergeen. Markaasay, ka waxa lagu soo hadhay jajabkii, waxay soo ururiyeen toddoba dambiilood oo ka buuxa.